Sida Loo Bilaabo Blog Jimicsi (6 Tallaabo) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Bilaabo Blog Fitness (6 Tallaabo)
Sida Loo Bilaabo Blog Fitness (6 Tallaabo)
Jimicsigu waa hal niche oo aan waligeed u muuqan in uu ka baxay qaabkii. Dabcan, taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay inay tahay niche ka buuxo tartan. Haddii aad tahay xamaasad jimicsi, tababare shakhsi, ama milkiile ganacsi yar oo diiradda saaraya caafimaadka iyo fayoobaanta, waxaad u baahan doontaa inaad hesho hab aad ku soo baxdo.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee taas loo sameeyo waa adigoo bilaabaya blog-ga jirdhiska. Nasiib wanaag, waxa jira qalab kaa caawin kara in la dhimo wakhtiga ay qaadanayso in la gaadho yoolkaas. Dhisida degel jimicsi firfircoon oo leh WordPress waxay noqon kartaa hab fudud, gaar ahaan marka aad ku bilowdo mawduuc saaxiibtinimo leh iyo Aaladaha website-dhisaha ee loo sameeyay WordPress.
Maqaalkan, waxaan ku sahamin doonaa waxyaabaha soo geli kara iyo ka bixida bilaabista blog-ga jirdhiska. Waxaan faahfaahin doonaa waxaad u baahan tahay si aad uga baxdo dhulka, ka doodo horumarinta degelkaaga cusub, ka dibna sharax sida aad lacag u samayn karto blogging. Haddii aad diyaar u tahay, soo jiid daboolkaaga dabaasha, qabso muraayadahaaga, oo aynu dhex galno mawduucan!
Ku bilow Blog Jimicsi leh WordPress Hosting
Cusbooneysiintayada tooska ah iyo difaacyada adag ee amniga ayaa ka saaraya maamulka server-ka gacmahaaga si aad diiradda u saarto abuurista waxyaabo fiican.
Maxaa Laga yaabaa inaad u Rabto inaad Bilowdo Blog-gaaga Jimicsiga
Haddii aad si buuxda uga shaqeyso warshadaha jimicsiga ama aad si fudud u leedahay hiwaayad la xiriirta, waxay u badan tahay inaad fahanto u heellanaanta ay qaadanayso inaad ku sii jirto qaabka ugu sarreeya. Nasiib wanaag, ma qaadanayso ku dhawaad ​​dadaal badan si aad u rogto caadooyinkaaga jirdhiska iyo talada miisaankaaga maqaal loogu talagalay blog.
Jimicsigu waa ganacsi weyn gudaha Maraykanka. Suuqa jimicsiga iyo jimicsiga waxa uu la kulmay guulo la taaban karo shanti sano ee la soo dhaafay. Koritaankan waxaa loo nisbeyn karaa inta badan wacyiga caafimaadka oo kordhay iyo dakhliga sare ee la tuuri karo labadaba. Marka la soo koobo, macaamiishu waxay raadinayaan inay lacag ku qaataan xirfadlayaasha jirdhiska.
Sidaa darteed, ma aha jimicsi kaliya kuwa ka faa'iidey. A kobcinta jirdhiska dhijitaalka ah ayaa sidoo kale albaabada u furay waxyaabaha ku jira jirdhiska khadka tooska ah sidoo kale.
Laabashada boggaaga jimicsiga ayaa kaa caawin kara inaad ku sii dhiirato yoolalka jimicsigaaga. Intaa waxaa dheer, ku darista hamiyadaada ganacsi ama blog leh dhagaystayaal daacad ah waa hab aad u fiican oo aad naftaada ku dhisto awood ahaan. Haddii aad tahay tababare shakhsi ah, mareegahaagu waxa kale oo uu u shaqayn karaa sidii faylalka khadka tooska ah si uu kaaga caawiyo inaad soo jiidato oo aad haysato macaamiisha.
Warka wanaagsan? Inaad noqoto blogger jir dhiska waa sahlan tahay markaad haysato qalabka saxda ah! Kahor intaadan bilaabin dhismaha goobtaada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si cad u qeexdo niche aad diirada saari doonto, maadaama warshadaha jirdhiska ay yihiin quruxsan kala duwan.
Qaybta kale ee ay tahay in la tixgeliyo ka hor intaadan hore u socon waa sida aad u magacaabi doonto goobtaada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu soo bandhigi karo waa a magac domain xusuus leh. Markaad dooranayso a .com waa heer aad u qurux badan, waxaa jira wax yar oo cusub Domainyada Heerka Sare (TLDs) la heli karo oo laga yaabo inay ku habboon tahay goobtaada jimicsiga la xiriirta.
Iyada oo waxyaabaha aasaasiga ah ay ka maqan yihiin dariiqa, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo dhisitaanka bloggaaga!
1. Go'aanso Platform-ka Blogging-ka ee la isticmaalayo
Halkan DreamHost, kama xishoon jacaylkayaga WordPress.
Sida Nidaamka Maareynta Maaddada (CMS), waa doorashada ugu sareysa 35% ee internetka. Maadaama WordPress uu aad caan u yahay, mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah bulsho adag oo taageerta isticmaalayaasha kuwaas oo doonaya inay ku caawiyaan.
Sababta kale ee aan u jecelnahay WordPress waa in ay tahay fududahay in la bilaabo. Waxaad ka kici kartaa oo aad ku qori kartaa WordPress gudaha hal guji, iyadoo ku xiran martigeliyaha aad doorato.
2. Dooro Adeegga Martigelinta Tayada
Doorashada bixiyaha martigeliyaha ee degelkaaga fayaqabka waxay u muuqan kartaa mid culus marka hore. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr waxyaalood inaad maskaxda ku hayso markaad wax iibsanayso inay ku caawinayso. Qodobka ugu muhiimsan ee go'aaminta ayaa noqon doona haddii aad qorsheyneyso inaad kor u qaaddo bogga internetka ee e-commerce ama haddii aad rabto inaad wax fudud ku dhigto oo aad diiradda saarto kaliya blogging.
Iyadoo aan loo eegin istaraatiijiyadaada, waxaa jira sifooyin muhiim ah oo aad rabto inaad maskaxda ku hayso markaad baadhayso martigeliyaha. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Amniga. Waxaad u baahan doontaa inaad si fiican dib u eegto waxa martigeliyahaagu uu bixiyo marka la eego ka ilaalinta fayraska iyo jabsiga. Raadi macluumaadka ku saabsan shahaadooyinka amniga, kaydinta maalinlaha ah, iyo habka loo soo celinayo goobta dhaawacan.
Software. Dhammaan martigeliyaha looma wada abuurin si siman. Haddii aad u baahan tahay software dheeraad ah si uu kugu caawiyo jidkaaga, hubi in martigeliyahaagu uu haysto waxaad rabto. Ma jiraan astaamo hagaajin ama ikhtiyaar software kuwaas oo kor u qaadi doona xawaaraha boggaaga?
Support. Awood u lahaanshaha la xiriirida taageerada farsamada habeen ama maalin waxay noqon kartaa sifo muhim ah oo aad leedahay. Haddi mareegahaaga fayadhowrka uusan runtii awoodin inuu bixiyo wax dhimis ah, helitaanka faham buuxa ee taageerada la socota qorshahaaga martigelinta waa lama huraan.
Tilmaamo dheeraad ah. Haddii aad runtii ku jirto xayndaabka waxa ku saabsan martigeliyaha la raacayo, hubi inay leedahay astaamo dheeri ah oo kaa caawin kara inaad go'aansato. Qaar ka mid ah martigaliyayaasha waxay la yimaadaan mowduucyo ku dhex jira, qalab naqshadeynta, goobaha diyaarinta, ama dhisayaasha goobta.
Dhib malahan nooca martigelinta aakhirka waxaad go'aansataa inaad u baahan tahay, halkan DreamHost waxaan ku bixinnaa noocyo badan oo kala duwan Qorshayaasha WordPress.
Markaad go'aansato martigeliyaha, waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad iibsato magac domain oo aad doorato xirmo martigelin ah (xusuusnow in qaar ka mid ah qorshayaasha martigelinta ay ku jiraan domain bilaash ah oo la iibsanayo). Haddii aad ka bilaabayso blog gaar ah oo fudud, martigelin la wadaago waa inuu ku siiyaa waxaad u baahan tahay. Had iyo jeer waad cusboonaysiin kartaa qorshahaaga haddii aad u baahato hadhow.
3. Dooro Mawduuc Saaxiibtinimo leh
Sida aan horay u soo sheegnay, warshadaha jirdhiska ayaa kor u kacaya. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaad u baahan doontaa inaad si dheeraad ah u fiirsato dulucda mareegahaaga si aad uga dhex muuqato goobta suuqa ee camiran. Doorashada mawduuca fayow-saaxiibtinimo ee boggaaga WordPress waa meel aad u fiican oo laga bilaabo.
Nasiib wanaag, haddii aad DreamHost u isticmaalayso adeeggaaga martigelinta WordPress, waxaad marin u heli doontaa xiisahayaga dhise goobta cusub ka BoldGrid oo ay ku jiraan tafatiraha bogga jiid-iyo-jiid oo ay la socdaan mawduucyo badan oo la beddeli karo oo si gaar ah loogu talagalay jirdhiska. Intaa waxaa dheer, samaynta mawduuc DreamHost waa deg deg!
Ku aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa inaad doorato "WP Website Builder" sida ikhtiyaarka ah inta lagu jiro hubinta iibsashada qorshahaaga DreamHost. Dabadeed, waxaanu si toos ah ugu rakibi doonaa WordPress iyo plugins-dhisiyaha degelka sare ee WordPress - Dhiirigelinta iyo Bogga & Dhisaha Boostada - oo ay dhiseen saaxiibadeen BoldGrid. Marka aad gasho WordPress, waxaad arki doontaa bogga dejinta dhiirigelinta.
Markaad diyaargarowdo, dooro Aynu Bilaabno! Badhanka.
Shaashada xigta, waxaad ku arki doontaa mawduucyo badan oo aad ka dooran karto. Dhiirrigelintu waxay ka kooban tahay 20 mawduucyo jimicsi oo kala duwan oo dhiirigelinaya. Marka aad doorato kuwa aad jeceshahay, waxa lagu dhex mari doonaa dhamaystirka habaynteeda.
Gunno kale ayaa ah inaad si fudud u tijaabin karto jawaab-celinta qaab-dhismeedkaaga saddex nooc oo shaashad ah, isla markaaba ka soo jeeda dashboard-ka.
Haddii aad u baahan tahay caawimo dheeraad ah oo ku saabsan bilaabista, dashboardkaaga WordPress ayaa hadda ku jiri doona fiidiyowyo wax barid ah. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa dhiirigelin cusub menu kaas oo kuu horseedi doona inaad u beddesho mawduuc ka duwan, haddii ay dhacdo inaad bedesho maskaxdaada hadhow.
4. Abuur Wadnaha-pumping Content
Hadda oo aad indhahaaga dhegaystayaasheeda miyir-qabka ah ku qabatay mawduuc soo jiidasho leh, waa inaad tixgelisaa siyaabaha qaar aad uga buuxin karto boggaaga waxyaabo xiiso leh. Marka ay timaado caafimaadka aadanaha iyo waxqabadka, waligaa dhibaato kama heli doontid mowduuca maqaalkaaga xiga. Mid ka mid ah habka lagu bilaabo waa in la rakibo qaar ka mid ah plugins fayaqabka maskaxda.
Haddii balooggaga fayoqabka uu u socdo in uu soo saaro cuntooyinka, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad eegto Cunto Qorsheeyaha Pro Recipes plugin. Qalabkan sifada ka kooban waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo taraafikada, aragtida bogga, iyo dakhliga. Waxaa dheer, waa bilaash oo loo hagaajiyay makiinadaha raadinta.
Xalka kale ee faa'iidada leh haddii aad qorsheyneyso inaad bixiso tababbarka shakhsi ahaaneed ama fasalada jimicsiga kooxda waa Jadwalka Ballanta Ugu Dambeeya plugin. Quruxda qalabkan jadwalka jimicsiga ayaa ah inaad abuuri karto goobo kala duwan, iyo sidoo kale hal-hal ama hal-ilaa-badan. Waxa kale oo loo dejiyay in lagu aqbalo lacagaha iyada oo loo marayo PayPal.
Waxaan horay ugala hadalnay mawduucyada BoldGrid iyo jiidid-iyo-hoos u shaqayntooda naqshadaynta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa mudan in mar kale la sheego sida bog-dhisaha plugins-ku uu u qaadi karo naqshaddaada heerka xiga. Waa dhaqan wanaagsan in la sameeyo hubin ku habboonaanta degdega ah ee u dhexeeya mawduucaaga iyo plugins-yadaada. Markaad taas sameyso, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad ka shaqeyso naqshadeynta goobtaada.
5. Sahami Sida Loo Dhaqaale Galiyo Bloggaaga Jimicsiga
Marka balooggaaga fayow uu diyaar u yahay inuu tago, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad tixgeliso siyaabo kala duwan oo aad kor ugu qaadi karto ama xitaa lacag uga samayn karto. Tusaale ahaan, waxaad ku wadi kartaa taraafikada goobtaada isdhaafsi. Haddii aad haysatid alaabo aadan noolaan karin la'aanteed habka jimicsigaaga, la xiriir shirkadaha soo saara oo arag haddii ay haystaan barnaamijka suuq geynta affiliate si loo abuuro dakhli dadban.
Ugu dambayntii, furaha lacag-ururinta waa abuurista nuxur aad u wanaagsan. Mar haddii aad isu taagtay sidii ka Ilaha macluumaadka ee aaggaaga niche, waxaad sahamin kartaa inaad ku bixiso wax ka kooban qiimo yar. Tusaale ahaan, haddii aad tahay tababare shakhsi ah, waxaad abuuri kartaa hagaha jimicsigaaga toddobaadlaha ah iyo talooyinka, qorshooyinka menu, ama waxyaabo kale oo ladnaan si aad uga iibiso goobtaada.
Martigelinta tartamada, iibinta badeecooyinka summadaysan, ama bixinta xiisado khidmad ku saleysan dhamaantood waa fikrado aad u fiican oo kaa caawin kara inaad lacag sameyso blogging.
Relacionado: 25 Hab oo Sharci ah oo aad Lacag ku Samayn Karto Online
6. La wadaag qoraaladaada si aad u horumariso mareegahaaga
Wadaagista cunto karinta smoothie ka dib jimicsigaaga ayaa laga yaabaa inay hadda noqoto neecaw. Si kastaba ha ahaatee, haynta maze of dhiirrigelinta warbaahinta bulshada waxaa laga yaabaa inay weli ku jirto liiskaaga 'wax-qabad'.
Warbaahinta bulshadu waxay kaa caawin kartaa inaad fikradaha ku beddesho dadka isku fikirka ah oo aad kor u qaaddo bloggaaga jimicsiga. Waxaa jira dhowr tabo oo muhiim ah oo ay tahay in maskaxda lagu hayo, oo ay ku jiraan:
Iskuxirayaasha. Xidhiidhada qaabaysan ee xeeladaysan ayaa gaadiidka ka wadi kara goob kasta oo bulsho.
Jadwalka Qalab sida Hootsuite waxay kaa badbaadin kartaa waqti marka ay timaado warbaahinta bulshada. Akhristayaashaadu waxay sidoo kale ogaan doonaan goorta la filayo wax cusub.
Gaadiidka. Waxa ku jira waa la qorsheeyay iyada oo loo marayo plugins sida Jetpack's Daabac module si loo daabaco meelaha kale. Tani waxay kaa caawin kartaa kordhinta gaajada dhagaystayaashaada.
La socoshada isbeddellada iyo aaladaha warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa jimicsi lafteeda. Markaad dejiso habka wadaagista boggaaga, si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid faa'iido leh oo madadaalo leh.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad bilowdo Blog Fitness
Haddi aad u baahan tahay caawinaad helida dhagaystayaal la beegsanayo, samaynta xeelada warbaahinta bulshada, ama samaynta warside, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal u seegin
Bilaabida Blog Fitness
Waxay u baahan tahay dadaal badan si aad u tababbarto naftaada ama kuwa kale si aad u guulaysato jimicsiga jireed. Si kastaba ha ahaatee, dhisidda caafimaadkaaga ama bloggaaga jir dhiska waa inuusan noqon mid adag. Halkan DreamHost, waxaan rabnaa inaan ku aragno inaad ku guulaysato blogging, taas oo ah sababta aan ula kaashanay BoldGrid si aan kuugu keeno astaamo la yaab leh si ay kaaga caawiyaan inaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah u hesho bloggaaga jimicsiga si toos ah.
WordPress waa saaxiibkayaga tababarka ugu jecel halkan DreamHost. Waxaad naga heli doontaa kor u qaadida waxqabadka Qorshayaasha martigelinta WordPress, kuwaas oo hadda lagu qalabeeyay Aaladaha wax-dhisaha mareegaha qaaliga ah taas oo ka dhigaysa WordPress in ka badan abid!
Weebly vs WordPress: Keebaa ugu Wanaagsan Mareegtaada? (Isbarbardhigga buuxa ee 2021)
Maxaa dhacaya runtii marka aad ku nuqul ka sameysid faylka iOS?